Chelsea oo u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul dirqi ah ka gaartay Leicester City … +SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul dirqi ah ka gaartay Leicester City … +SAWIRRO
Dajiye June 28, 2020
(England) 28 Juun 2020. Chelsea ayaa u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leicester City 0-1 kulan qeyb ka ahaa wareega siddeed dhamaadka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Leicester City iyo Chelsea.
Daqiiqadii 63-aad Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay xiddiga qadka dhexe ee reer England Ross Barkley, kaddib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Willian.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 0-1 ah ay kaga adkaatay Chelsea kooxda Leicester City, guushaan ayaa ka dhigay in Blues ay kula biirtay kooxaha Man Unitd iyo Arsenal wareega afar dhamaadka tartanka FA Cup-ka.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Newcastle United iyo Manchester City ee tartanka FA CUP oo la shaaciyay
DEG DEG: Isku aadka afar dhammaadka tartanka FA Cup-ka oo haatan la sameeyey